Morgan Stanley wuxuu ku andacoonayaa in gaariga Apple uu yahay midka kaliya ee la tartamaya ee u qalma Tesla | Waxaan ka socdaa mac
Morgan Stanley wuxuu ku andacoonayaa Apple Car inay tahay qofka kaliya ee u qalma ee la tartamaya
Shalay waxaan xaqiijinay sida ay qortay wakaaladda Reuters, taas oo noqon karta gaariga cusub ee shirkadda Californian, wuxuu bilaabi karaa in la soo saaro 2024. Baabuurka Apple waa riyo ay soo jiiteen warar xan ah oo aad u tiro badan, laakiin ogeysiiskan ayaa bilaabaya inuu wax ka yara culus yahay. Xaqiiqdii, Morgan Stanley wuxuu sheeganayaa gaariga Apple waa tartanka kaliya ee u qalma Tesla.
1 Apple waa xifaaltan aad u xoogan wuxuuna horey u saameeyay Tesla.
2 Tesla wuxuu ugu dambeyn lahaan doonaa tartan u qalma, inkasta oo ay faa'iido badan qaadato
Apple waa xifaaltan aad u xoogan wuxuuna horey u saameeyay Tesla.
Tesla waa nooca kaliya ee baabuurta korontada ku shaqeeya ee hadda khubaradu sheegaan inay u qalmaan. Waxaa jira tusaalayaal badan oo dheeri ah laakiin ma gaaraan tayada sumaddan sidoo kale kuma gaarayaan xagga tikniyoolajiyadda, dabcan iyaguna kuma gaadhaan qiimayaasha. Shalay Reuters waxay xaqiijisay in Apple ay dooneyso inay bilowdo soo saarida waxa loogu yeero Apple Car (ma ogin in loogu yeeri doono taas iyo hadii aadan eegin si khaldan loo magacaabay AirPods Studio) 4 sano gudahood. Morgan Stanley wuxuu ku andacoonayaa in gaariga Apple uu yahay midka kaliya ee la tartamaya ee u qalma Tesla. Taas aad iyo aad saamiyada kan dambe ayaa ku dhacay ogeysiiska la sameeyay awgood.
Hogaamiyaha adeegyada maaliyadeed, wuxuu sharxayaa in xiisaha Apple ee ah inuu soo galo warshadaha baabuurta korontada u badan tahay inuu doonayo "Ku hagaaji khibradda wadista isdhexgalka tooska ah ee qalabka, softiweerka iyo adeegyada". Isla mar ahaantaana, shirkaddu sidoo kale waxay geli kartaa "warshad weyn oo dhakhso u koraysa." Markaad tahay Mass waxaad "si weyn u hagaajin kartaa khibrada isticmaale."
Tufaaxdu waxay leedahay maaddooyinka muhiimka ah taas oo aan aaminsanahay inay muhiim u tahay ku guuleysiga mustaqbalka warshadaha baabuurta. Helitaanka raasumaalka, awoodda soo jiidashada iyo haysashada tayada sare, naqshadeynta qalabka la xaqiijiyay. Marka lagu daro nidaamka deegaanka ee hodanka ah si looga faa'iideysto rukunka soo noqnoqda. Waxaan rumeysan nahay in qiimaha fursadda adeegga ee ku jirta Internet-of-Cars (IoC) ay ka badnaan karto ganacsiga baabuurta lafteeda (unugyada x qiimaha).
Muhiimad ahaan, Apple waxay dhowaan maal gashatay inay ku darto shan teknoolojiyad gudaha ah oo kaa caawin kara. Processor-yada, batteriga, kamarada, dareemayaasha iyo shaashadda. Waxay aaminsan yihiin inay jiraan darawalo kale oo koritaan sida AR, lacag bixin, iyo daryeel caafimaad kuwaas oo ay u badan tahay in la hirgaliyo goor hore, taasoo ka dhigaysa waqti ka badan 4 sano inay u muuqato mid macquul ah.
Tesla wuxuu ugu dambeyn lahaan doonaa tartan u qalma, inkasta oo ay faa'iido badan qaadato
Qeexitaanadan iyo faahfaahintaan, dhulka ayaa horeyba loogu diyaar garoobayaa marka gaariga korontada ee Apple uu ka dhex muuqdo suuqa. Haddii aan tixgelinno isbeddellada sicirka ee aaladihii ugu dambeeyay, waxay noqon doontaa mid mamnuucaya sida ugu fiican. Laakiin shirkadda Californian waxay leedahay dhibaato aasaasi ah oo aad u muhiim ah, Tesla ayaa aad uga horreeya soo saare kasta oo kale.
In kasta oo Apple leedahay shanta maado ee ay ku keento baabuur koronto ku habboon suuqa afar sano gudahood, Tesla waxay leedahay isla waqti isku mid ah si loo wanaajiyo waxa jira. Marwalba way fududahay in la hagaajiyo waxa jira halkii laga abuuri lahaa meel xoq ah. Waa run in gaariga uu yeelan doono waxa ugu fiican, laakiin waa inuu diirada saaraa wax walba nidaamka batteriga. Halkaas Tesla waa boqoradda waxayna leedahay aalado aad u fiican.
Waa run in waxyaabo badan oo ka mid ah waxyaabaha ay tahay inay galaan Apple Car, shirkaddu waxay hadda ku tijaabineysaa aaladaha kale sida iPad, iPhone iyo kuwa kale, sida qalabka 'LiDAR' iyo mustaqbalka shaashadaha leh teknolojiyada cusub ee LED-ka, oo si fiican ula jaan qaadi kara shaashadda laga yaabo inay ka dhex jiraan gaariga. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay iyada oo Apple aanad waligaa ogaan karin waxa ay noqon doonto tallaabada xigta. Si kastaba ha noqotee, waxaan maqalnay xantaas ku saabsan gaarigaaga korantada muddo dheer. Waxaan dhihi karnaa taas Tirinta wararka cusub iyo xanta ayaa meel walba ka bilaabmaysa.
Annaga waan sugeynaa In laguu sheegi karo wixii war ah ee ku soo kordha mowduucan oo hubaal xan badan ay soo muuqan doonaan wixii hada ka dambeeya waana in lagu xisaabtamo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Morgan Stanley wuxuu ku andacoonayaa Apple Car inay tahay qofka kaliya ee u qalma ee la tartamaya
Patent cusub wuxuu muujinayaa suurtogalnimada in leysku ku xiro Mac-ga
Sida loo demiyo cusbooneysiinta otomaatiga ah ee Apple Watch-kaaga